VLC yahay waa tan oo keliya ma aha waxa ay ka ciyaari karaan liiska aan dhammaadka lahayn ee files multimedia on nidaamyada hawlgalka kala duwan, laakiin waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in qulquli videos si hufan on aaladaha kala duwan, in aad u baahan yahay oo aan wax Deji. Mid ka mid ah ku raaxaysan karaan liiska dheer ee filimada oo ay leeyihiin, oo fadhiya meel kasta oo ay guriga la isticmaalayo VLC Media labada Player iyo Streamer. Halkan waxaa ah sidii ay u ah labada software ah.
Si fudud raac tallaabooyinka sida hoos ku siiyey oo aad noqon doontaan jidka aad ku riyaaqayaa videos on qalabka kala duwan ee wax waqti ah.
Qeybta 1: VLC Media Player
Qeybta 2: Sida loo isticmaalo VLC Media Player inay sii qulquli videos on qalabka kala duwan
Qeybta 3: VLC Streamer
Qeybta 4: Sida loo isticmaalo VLC Streamer inay sii qulquli videos on qalabka kala duwan
Qeybta 5: The Best VLC Alternative
Features, ciyaaryahan warbaahinta u fiican in ciyaara oo dhan cayn kasta oo files multimedia iyo sidoo kale qulquli karaan video on networ ah. taageerayaan OS: Windows, Mac, Linux , Android , macruufka iwm
Talaabada 1: Download iyo rakibi VLC Media Player isticmaalaya link ah sida kor ku siiyo.
Talaabada 2: Hadda, ordo VLC Media Player iyo riix qaybta Media> Open File.
Talaabada 3: Riix Browse badhanka / dar iyo dooran faylka aad rabto in aad sii qulquli.
Talaabada 4: Riix Stream / Save button saaran yahay ka dibna dooran goobaha.
Talaabada 5: Hadda, Output sanduuqa Stream wada hadal ah loo furo, ka hubi Play ku yaalo sanduuqa, haddii aad rabto in aad file ah inuu u ciyaaro kombiyuutarka aad u samaynta on, haddii kale guji sanduuqa UDP ah, buuxi Ciwaanka IP: ga ah kombiyuutarka aad doonaysid in aad ka hoorto, oo Port ay ka baxaan sida 1234.
Talaabada 6: Hadda, guji badhanka Stream in ka hor dhaqaaqo.
Tallaabo 7: Tag qalab / computer aad rabto in aad ka durduri movie ed in, rakibi VLC on PC iyo waxa maamula.
Tallaabo 8: Riix File, markaas dooran Open Network Stream. Ha beddelin goobaha kasta oo riix OK.
Tallaabo 9: Haddii wax kasta ayaa xaq, file waa bilaabi ciyaaro on fog computer 10 seconds ama si ka dib!
Features, VLC Streamer isticmaalaa VLC in ay la tacaalaan diinta dhabta ah ee filimada in qaabka haboon ee qalabka macruufka iyo Android.
Talaabada 1: Isticmaal links kor ku siiyo inaad kala soo baxdo iyo gashato ku saabsan qalabka gaarka ah.
Talaabada 2: Orod Streamer VLC ka Gargaare, haddii ay taasi u Windows iyo dar filimka aad jeclaan lahayd inaad sii qulquli.
Talaabada 3: Hadda, u tag VLC Streamer ku saabsan qalabka telefoonada gacanta, haddii ay taasi ku iPhone iyo furi Streamer VLC ah, waa in ay bilaabaan by baarista kombiyuutarada laga heli karo.
Talaabada 4: Marka, your computer (Windows ama Mac) ayaa la helay iyo bandhigay qalab mobile, guji magacaaga computer oo liiska ku jirta.
Talaabada 5: Ku dar filimka ka mid ah liiska laga heli karaa ama waxa kale oo aad ka raadin kartaa, waayo.
Talaabada 6: Hadda, waa in aad qaadato bogga Tayada Streaming, dooro xalka aad jeclaan lahaa inuu ka ciyaaro movie ee guji badhanka Daawo!
Tallaabo 7: 10-15 ilbiriqsi ee soo socda gudahood, waa in aad arki karin filim la ciyaaray ku saabsan qalabka telefoonada gacanta noqon.
VLC Media Player iyo VLC Streamer labadaba waa hab fiican oo ah hoorto videos. Streamer VLC waxaa inta badan loola jeedo in lagu hoorto videos on your mobile qalabka ka your computer halka Media VLC ka Player samayn karaan wax la mid ah oo ku saabsan qalabka telefoonada gacanta iyo kombuyuutarrada kale aad leedahay sidoo kale.
Wondershare Video Converter Ultimate , powerfull badan VLC, ayaa diyaar u ah Windows, Mac, iyo ka ciyaari kara kasta qaab maqal iyo muuqaalka leh. Waxaa intaa dheer, waxay u bedeli karaan, download, edit, gubi, record, il iyo ciyaaro videos. Waxaa si degdeg ah uu leeyahay oo dhan xal video.
The Best VLC Alternative, All-In-One Video Xalka!
Alternative VLC waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu dhaqsiyaha badan warbaahinta in ciyaari karo files music video iyo goobtii aan kala carar kasta. Mid ka mid ah sidoo kale in Mozilla karaa wali caddayn tayo sare leh, wax ciyaaryahan oo warbaahinta ugu kale ka maqan sida ka muuqatay. Waxay leedahay muujinta kale oo cajiib ah kaas oo u ogolaanaya auto xiritaanka ee mashiinka ka dib markii loo maqli karo. In ay mid ka mid ah qurbaanno ugu dambeeyey ee suuqa, waxa uu leeyahay qaar ka mid ah muuqaalada fiican in ay yihiin hab ka fiican yahay tartanka.
> Resource > VLC > Stream videos la VLC Media Player ama VLC Streamer